Laurent Gbagbo oo la soo xiray - BBC News Somali
Laurent Gbagbo oo la soo xiray
Image caption Laurent Gbagbo oo xukunka hayay toban sano ayaa diiday inuu xukunka ka dego kadib doorashadii November ee laga guulaystay
Masuuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee Ivory Coast Laurent Gbagbo la soo xiray, kadib howl milatari oo socotay toddobaadyo.
Wasaarda gaashaandhiga ee Faransiiska, ayaa sheegtay in ay soo xireen ciidamada Alassane Ouattara oo ay taageerayeen kuwa Qaramada Midoobay iyo Faransiiska.
Laurent Gbagbo ayaa la geeyey Golf hotel oo ku yaala Abidjan oo ah saldhiga Qaramada Midoobay iyo Madaxweyne Allasane Ouattara.
Nolosha siyaasada Laurent Gbagbo
Kaddib olole muddo dheer socday oo loo soo galay habka dimoqraadiyadda axsaabta badan, Gbagbo waxaa uu awoodda qabtay sanadkii 2000. Laakiin doorashooyinkaasi, sidii dhacday intii uu siyaasadda ku soo jiray oo dhan, waxay ahaayeen qaar lagu muransan yahay, ugu dambaystiina dhiig ku daatay.
Gbagbo, oo waqtigaas ahaa siyaasi yar, waxaa uu ka guulaystay hogaamiye inqilaab dalka ku qabsaday, general Robert Ghii, kaddib markii shakhsiyaad badan oo waaweyn loo diiday inay tartanka doorashada ka qayb galaan.
Dadka reer Ivory Coast waxay yiraahdeen intii askari fiicani noo talin lahaa siyaasi xun ayaan ka doornnay.
Hase ahaatee waxay ku qaadatay muddaharaadyo waaweyn oo dhiig ku daatay inuu Gbagbo qasriga madaxtooyada fariisto. Taasi waxay sii xoojisay wixii uu aaminsanaa oo ahayd inuu yahay ninka runtii ay dadweynuhu rabaan.
Laakiin waqtigiisa xukunka si xun ayuu ku bilawday. Kaddib rabshadihii doorashada ka dhacay, waxaa magaalada Abidjan laga helay xabaalo ay ku jiraan dad gaaraya 57 qof oo reer woqooyi ah. Haddana, sanadkii 2002dii, jabhadda reer woqooyigu waxay qabsadeen in ka badan kala bar waddanka kahor intii aysan ciidammada Faransiisku soo fara gelin.
Inkastoo heshiis nabadeed la gaaray haddana Gbagbo waqti yar kaddib dagaalkii ayuu bilaabay mar kale. Al Xasan Wataara, oo ah siyaasiga reer woqooyiga oo mar walba beenin jiray inuu wax xiriir ah kaal dhexeeyo jabhadaha, aad ayuu u xanaaqay.
Heshiisyada nabadda waxaa la socday dhoollatus siyaasadeed , iyadoo dadka reer Ivory Coast ay sii faqrinayeen. Gbagbo waa nin ku xeel dheer xaaladaha waqtiga dhow, laakiin ma laha qorshe waqtiga fog, sidaas waxaa ii sheegay hawl wadeen siyaasadda. Hase yeeshee sanadkii hore waxaa dalka vory Coast laga sameeyay doorashadii dib loo dhigayay tan iyo sanadkii 2005tii.
Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay waxay isku raaceen in Mr Wataara uu doorashada ku guulaystay. Laakiin Gbagbo, oo ka soo jeeda qolo laga tiro badan yahay, oo lagu magacaabo the Bete, waxaa ka go'nayd inuusan meesha ka dhaqaaqin.
Taageerayaashiisu waxay ku jeclaayeen Laurent Gbagbo khudbadihiisa fiican iyo sida xoogga leh ee uu wax uga sheego dalka Faransiiska oo gumaysan jiray Ivory Coast. Taageerayaashu waxay sheegaan in Gbagbo ay rideen Faransiiska iyo cadawga horumarka.
Dadka Gbagbo ka soo horjeeda waxay ku eedeeyaan isaga iyo afadiisa Simone inay guddoomiyeyaal u yihiin xukuumad kalitalis ah oo ku dhisan colaad iyo cabsi oo musuqmaasuq ka dheregtay. Laakiin hal arrin muran kama taagna, Ivory Coast way ka xun tahay sidii ay ahayd markii uu Gbagbo madaxweynaha ka noqday toban kahor.